🥇 ▷ Sida loo eego Amazon Prime Instant Video on Android ✅
Sida loo eego Amazon Prime Instant Video on Android
Sababaha ay naftooda u sii wataan, Amazon markii ay muddo dheer qaadanayeen si ay u soo qaadaan adeeggaaga fiidiyowga, Amazon Prime Video (hore loogu yaqaanay LoveFilm Instant ee Boqortooyada Midowday), aaladda Android. Horey waxaa looga heli jiray kiniiniyada Amazon Kindle Fire, iyo sidoo kale iOS, adeeggan waxaa markii ugu horreysay laga heli jiray taleefannada Android bilo ka hor iyo hadda ugu dambeyntiina sidoo kale lagu heli karaa kiniiniyada Android.
Laakiin iskama dhexqarmi kartid dukaanka Play-ka, marka halkan waxaan ku tusinaa sida adeega looga helo aaladdaada.
1. Iska indhatir wixii caadiga ahaa Barnaamijka Dukaanka ee Amazon ka Play Store, sababta oo ah noocaasi ma ogolaanayo inaad ku ciyaarto feylasha fiidiyowga ah sababtuna waa muranka u dhexeeya iyaga Amazon iyo google halkii aad cinwanka ka tegi lahayd http://www.amazon.co.uk/androidapp telefoonkaaga Android iyo riix barnaamijka soo dejinta.
2. Waxay u badan tahay in taleefankaaga gacantu uu kaaga digayo in dalabka uu dhaawici karo qalabkaaga, kaliya waxaa wanaagsan inaad rakibto. Tani waxay kaa horjoogsaneysaa inaad gabi ahaanba gashato, taas oo markaa u baahan tahay inaad beddesho dejimaha si aad u oggolaato.
3. Si tan loo sameeyo, u gudub Settings> Security oo hubi sanduuqa ilo aan la aqoon, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku rakibto codsiyada meelkasta oo aad dooratid. Haddaba tag oo rakib appka. waxay codsan doontaa rukhsad dhowr ah, ansaxinta, rakibaysa appka, ka dibna ka bilaabi doonta saxanka app-ka.
4. Marka lagu rakibo, waa inaad gelisaa arjiga si aad u isticmaasho faahfaahinta koontada Amazon ee laxiriirta xisaabtaada Prime ama Prime Video.
5. Mar alla markii wax walba la dhammeeyo, Touchez Dukaanka oo ay ku taal badhanka waaxda geeska kore ee app. Oo waxaad doorataa Amazon Instant Video, dhagsii fiidiyowga ugu weyn ee muuqaal ah waxayna kugu dhajin doontaa inaad gashato Qalabka Video-ga Degdega ah.
6. Codsiga ayaa kuu tilmaami doona inaad rakibto Prime Player Video Player, guji khaanadda ku calaamadaysan ‘Bilaash’ ka dibna khaanadda ku calaamadsan ‘Ku rakib’. Mar labaad, waa inaad aqbashaa taxane rukhsad ah.
7. Markaas dalabka wuxuu bilaabi doonaa inuu ku rakibo taleefankaaga wuxuuna u muuqan doonaa sidii codsi gooni ah, oo loo yaqaan ‘Instant Video’, kaas oo aad markaa bilaabi karto inaad ku baarto fiidiyowyada adeegga oo aad ku daawatid qalabkaaga.
Waa la rakibi karaa si loo rakibo, laakiin ciyaaryahanka ayaa leh astaamo qabow sida inuu kuu sheego kuwa jilayaasha jooga meel kasta
8. Haddii aad ka welwelsan tahay amniga, waxaa fikrad fiican ah inaad ku laabato Nidaamka Amniga oo aad calaameyso sanduuqa jeegagga ilaha aan la garanaynin marka aad dhammeysato.